भारतविरुद्ध ७ वर्षे आर्चीले खेल्ने, कोहलीलाई आउट गर्ने इच्छा! | Hamro Khelkud
भारतविरुद्ध ७ वर्षे आर्चीले खेल्ने, कोहलीलाई आउट गर्ने इच्छा!
एजेन्सी – भारत र अस्ट्रेलियाबीचको तेस्रो टेस्ट मेलवर्नमा आगमी २६ डिसेम्बर देखी सुरु हुँदैछ । पहिलो टेस्ट भारतले ३१ रनले जित्दा दोस्रो खेलमा १ सय ४६ रनले पराजित भएको थियो ।
भारतसँग हुने तेस्रो टेस्ट अघि अस्ट्रेलियाले आफ्नो १४ सदस्य खेलाडी घोषणा गरेको छ । जस्मा ७ वर्षिय आर्ची शिलर टोलीमा रहेका छन् । कप्तान टिम पेनले आर्ची सह– कप्तान हुने बताएका छन् । पछिल्लो केहि दिन आर्चीले अस्ट्रेलिया क्रिकेट टिमसँग अभ्यास गरि रहेका छन् । आर्चीले अभ्यास गरि रहेको एक भिडियो क्रिकेट अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो डिसेम्बरमा आर्चीको परिवार उनको मुटुको तेस्रो पटक शल्यक्रिया गराउन मेलबर्न आएको थियो। जस्मा चिकित्सकले सो शल्यक्रियाको परिणाम जस्तोपनि हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसकै केहि दिनपछि आर्चीका बुबाले उनलाई आफ्नो इच्छा सोधपुछ गर्दा उनले अष्ट्रेलियन टोलीको कप्तानी गर्दै भारतीय ब्याट्सम्यान विराट कोहलीलाई आउट गर्ने रहेको बताएका थिए । आर्चीको सो प्रतिक्रियापछि अष्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले उनको चाहना पुरा गर्ने मौका दिएको हो।
विराट कोहली र टिम पेनले आर्चीसँगै फोटो खिचाएका छन् । आर्ची अस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायनका ठूलो फ्यान पनि हुन् । शनिवार आफ्नो सातौँ जन्मदिन मनाएका सिलरलाई कप्तान टिम पेनले जन्मोत्सवककै समयमा तेस्रो टेस्टमा भारतविरुद्ध खेल्ने बताएका थिए ।